🥇 ▷ Google Pixel 4 wuxuu ku faani doonaa Habdhaqanka Habeenkii Dheer ee Night Sight ✅
Google Pixel 4 wuxuu ku faani doonaa Habdhaqanka Habeenkii Dheer ee Night Sight
Google Waxay ku talajirtaa inay dib u cusbooneysiiso qoyskeeda alaabooyinka qalabka inta lagu gudajiray bisha Oktoobar, iyo mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn ee munaasabadda ka dhigi doona Pixel 4. Toddobaadyadii la soo dhaafay qaar ka mid ah astaamaha lagu soo daadiyay; maanta 9to5Google keenaa macluumaad cusub oo ku saabsan kamaradda gadaal, kaas oo nashqadeyntiisu ay qaadan doonto moodeel laba jibaaran Sida ku xusan qaababka la sheegay, taleefanka wuxuu lahaan doonaa a Habayn Sight Night Sight ah.
Habaynta Nightight Sight waxay u oggolaaneysaa qabsashada cirka xiddigta leh
Si loo noqdo mid la taaban karo, the Xawaareynta iyo howlaha kale ee guud ee la xiriira waxqabadka qaabdhismeedka. Awooda uu ku xuso qaado qabow cirka xiddigtu, dhaqan loo yaqaan astrophotography. Istaraatiijiyaddu way cadahay, kor u qaad liiska sawirrada habeenkii ee qalabka mobilada markale.
Sifada kor ku xusan, taas si weyn ayey u hagaajineysaa qabashada habeenka iyagoo u mahadcelinaya AI, oo laga dooday sanadkii hore Pixel 3 oo markii dambe lagu sii fidiyay moodooyinka duugga ah. Shaki la’aan, waxay noqotay sheekada ugu weyn ee Terminalka. Soosaarayaasha kale ayaa raacay wadada iyaga oo adeegsanaya nidaamyo u gaar ah aaladaha sare, sida kiiska Samsung Galaxy S10 ama Huawei P30 Pro.
Sida laga soo xigtay isha, Pixel 4 ayaa sidoo kale ku faani doonta “Motion Mode”, taas oo adeegsadayaashu ay awoodaan ka qaado sawirada dhaqdhaqaaq badan, sida nashaadaadka ciyaaraha. Qorshaha Google waa inuu la xiriiraa soo jeedinta ay soo bandhigeen kaamirooyinka madaxa-bannaan ee waxqabadka sare. Dabcan, ilaa hadda ma jiro wax macluumaad ah oo tilmaamaya imaatinka Pixel jir sidan sidan ah.
Warbixin dhaw, oo ay wadaagaan isla qaabkan, ayaa filayay in Pixel 4 ay ku booddoono qaabeynta saddex kamaradood. Laba 12-megapixel dareemayaal ah ayaa la sii hayn doonaa, laakiin midka saddexaad wuxuu noqon doonaa a 16 MP telephoto. Marka la eego shaashadda OLED, moodelka yar wuxuu gaari doonaa 5.7 inji, halka kala duwanaanta ‘XL’ uu noqon doono 6.3 “.